ကိုယ်ကာယလိုက်စားသူတွေသိသင့်တဲ့ အပြေးလေးမျိုးနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အပြေးဖိနပ်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ
ကိုယ်ကာယလိုက်စားသူတွေသိသင့်တဲ့ အပြေးပုံစံလေးမျိုးနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အပြေးဖိနပ်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ
3 Aug 2018 . 3:36 PM
Adidas ချစ်သူတွေအားလုံးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့ ပို့စ်တစ်ခုကို စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့် အကြောင်းအရာဟာ Adidas ပရိသတ်တွေပါမက ဖတ်ရှုသူတိုင်းအတွက် အကျိုးရှိမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မနက်စောစော ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားလုပ်သူတွေ၊ ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ အပြေးလေ့ကျင့်သူတွေ၊ ကိုယ်ကာယလိုက်စားသူတွေ အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိပြီး အသုံးတည့်စေမယ့် ဗဟုသုတတစ်ခုကို ဒီပို့စ်မှာ မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ကျန်းမာရေးအရ အပြေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းထဲက အပြေးသမားတွေကို ဒီအကြောင်းအရာလေး ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးအကျိုးရှိစေဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အပြေးအမျိုးအစား ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသလဲဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အပြေးပုံစံ၊ ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ အပြေးပုံစံအပေါ် မူတည်ပြီး ဘယ်လိုမျိုးဖိနပ်ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့ Fast Run အပြေးပုံစံ
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အခြေခံချမှတ်ထားတဲ့ အပြေးအမျိုးအစား ရှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Adidas က ထုတ်လုပ်တဲ့အားကစားဖိနပ်တွေရဲ့ ပေးစွမ်းတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေအရဆိုရင်တော့ အပြေးအမျိုးအစားကို လေးမျိုးလေးစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့ အပြေးပုံစံ Fast Run ဖြစ်ပါတယ်။ Fast Run ဆိုတဲ့ နာမည်အတိုင်း ပေါ့ပေ့ါးပါးပါးပြေးတဲ့ အပြေးသမားတွေ၊ မနက်စောစော အချိန်မှန်ထပြေးတဲ့သူတွေဟာ Fast Run အပြေးသမားတွေဖြစ်ပြီး သူတို့တွေဟာ ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်အရ သက်လုံကောင်းစေဖို့၊ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းညှိဖို့နဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေဖို့အတွက် အပြေးလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ဆောင်တဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Fast Run အပြေးသမားတွေဟာ အများအားဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေ ရရှိခံစားနိုင်ဖို့ အပြေးလေ့ကျင့်တဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ဖိနပ်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလည်း ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့ ဖိနပ်မျိုးကို ဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဟာ Fast Run အပြေးသမားဆိုရင်တော့ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ အပြေးဖိနပ်တစ်ရံ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ Adidas Questar နဲ့ Cloudfoam မော်ဒယ်လိုဖိနပ်မျိုးဟာ Fast Run အပြေးသမားတွေနဲ့ လိုက်ဖက်ကိုက်ညီတဲ့ ဖိနပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ဟန်ချက်ညီတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့အတူ မြို့တစ်ပါတ်ပတ်မယ့် City Run အပြေးပုံစံ
City Run အပြေးပုံစံကို မြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မနက်ပိုင်းနဲ့ ညနေပိုင်းတွေမှာ နားကြပ်နှစ်ဖက်တပ်ပြီး မြန်မြန်နဲ့မှန်မှန်ပြေးနေတဲ့ အပြေးသမားတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ City Run အပြေးသမားတွေဟာ များသောအားဖြင့် တာတိုပြေးသူတွေဖြစ်ပြီး မြို့တစ်ဝိုက်နေရာအနှံ့အပြားမှာ သူတို့ကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ကားလမ်းမ ပလက်ဖောင်းတွေ၊ ပန်းခြံတွေနဲ့ ကစားကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေဟာ City Run အပြေးသမားတွေ ပြေးလေ့ရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ ကိုယ့်အာရုံနဲ့ကိုယ် အေးအေးလူလူ အပြေးလေ့ကျင့်တဲ့သူမျိုးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Fast Run နဲ့ City Run အပြေးပုံစံတွေဟာ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပြီး ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ပေးစွမ်းတဲ့ အပြေးပုံစံတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ City Run ပြေးတဲ့သူတွေဟာ Fast Run ပြေးသူတွေထက် ခရီးအကွာအဝေးပိုပြေးကြတဲ့အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့ ဖိနပ်မျိုးကို လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် City Run ပြေးတော့မယ်ဆိုရင် စွမ်းအင်ထုတ်နည်းပညာတွေပါဝင်တဲ့ Pureboost နဲ့ Solarboost လို မော်ဒယ်ဖိနပ်မျိုးကို ဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
(၃) စွမ်းရည်အပြည့်နဲ့ တာရှည်ပြေးတဲ့ Long Run အပြေးပုံစံ
Long Run အပြေးသမားတွေကတော့ Fast Run နဲ့ City Run အပြေးသမားတွေထက်ပိုပြီး အပြေးလေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်မှာ အားစိုက်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Long Run အပြေးသမားတွေအတွက် ပြေးခြင်းဟာ သူတို့ရဲ့ဝါသနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ကို ပိုပိုပြီး ဝေးဝေးပြေးနိုင်ဖို့၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကွာအဝေးကို အချိန်တိုအတွင်းရောက်နိုင်ဖို့နဲ့ ကုိုယ့်ရဲ့စံချိန်ကိုယ်ပြန်ချိုးနိုင်ဖို့ တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားအားထုတ်ကြသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Long Run အပြေးသမားတွေဟာ ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိ ပြေးနိုင်သလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ အောင်မြင်မှုစံနှုန်းအဆင့်ဆင့် ချမှတ်ထားကြသလို ခရီးတစ်ခုကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် ပြေးပြီးသွားရင်လည်း ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိပြေးနိုင်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ မှတ်ကျောက်စိုက်ထူကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ Long Run အပြေးသမားတွေဟာ များသောအားဖြင့် တာရှည်ပြေးသူများဖြစ်ကြတဲ့အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမြင့်တဲ့ ဖိနပ်မျိုးကို လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ စွမ်းအင်တန်ပြန်မှုပါဝင်တဲ့ Ultraboost နဲ့ Energy Boost လို ဖိနပ်မျိုးဟာ Long Run အပြေးသမားတွေအတွက် အရွေးချယ်သင့်ဆုံး အရည်အသွေးမြင့်အပြေးဖိနပ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီး စိန်ခေါ်မှုတိုင်းမှာ အနိုင်ယူမယ့် Power Run အပြေးပုံစံ
နောက်ဆုံး Power Run အပြေးပုံစံကတော့ စစ်မှန်တဲ့ အားကစားသမားတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ စွမ်းအင်အပြည့်ကို ထုတ်သုံးတဲ့ အပြေးပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်အပြေးသမားအများစုမှာ Power Run အပြေးပုံစံကို ကျင့်သုံးတာတွေ့ရပါတယ်။ မာရသွန်အပြေးသမားတွေ၊ အိုလံပစ်အပြေးသမားတွေ၊ စံချိန်ချိုးမယ့် အပြေးသမားမျိုးတွေ အစရှိတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်အပြေးသမားတွေဟာ Power Run ပြေးသူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာစွမ်းအင်နဲ့ အချိန်တွေကို အပြေးလေ့ကျင့်ခြင်းတစ်ခုတည်းအတွက် အသုံးချကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Power Run အပြေးသမားတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်ထက်မြက်လာအောင် အမြဲတမ်းသွေးနေသူတွေဖြစ်သလို ပြိုင်ပွဲကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ ခြေလှမ်းတစ်လှမ်း ဒါမှမဟုတ် စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်ရဲ့ တန်ဖိုးကို ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်သူတွေပါ။ အပြေးအမျိုးအစား လေးမျိုးရှိတဲ့အထဲက ဒီ Power Run အပြေးပုံစံဟာ ခွန်အားအစိုက်ထုတ်ရဆုံးနဲ့ စွမ်းအင်အမြောက်အမြားအသုံးချရဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် Power Run ပြေးတော့မယ်ဆိုရင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ အားအင်ပြည့်ဝပြီး အဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်တဲ့အပြင် အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ အပြေးဖိနပ်တစ်ရံကတော့ မရှိမဖြစ် လိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် အမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ပေးစွမ်းတဲ့ Alphabounce နဲ့ Alphabounce Beyond လိုဖိနပ်မျိုး၊ Boost နည်းပညာရာနှုန်းပြည့်ပါဝင်တဲ့ Ultraboost လိုဖိနပ်မျိုးဟာ Power Run အပြေးသမားတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖိနပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် အပြေးအမျိုးအစား လေးမျိုးက ဘာတွေလဲ?သူတို့နဲ့ လိုက်ဖက်ကိုက်ညီတဲ့ အပြေးဖိနပ်မျိုးက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို သိရှိသွားလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ကိုယ်ကာယလိုက်စားသူများအားလုံး အကျိုးရှိပြီး ဗဟုသုတဖြစ်စေမယ့် ပို့စ်တွေကို အချိန်မှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး ကိုယ်ကရော ဘယ်လိုအပြေးအမျိုးအစားထဲပါနေလဲ? ဘယ်လိုအပြေးသမားမျိုးကို ခုံမင်လဲဆိုတာကို ကွန်မန့်ကနေတဆင့် ပြန်ပြောခဲ့ပေးပါဦး။
Ref: All About Adidas
ကိုယျကာယလိုကျစားသူတှသေိသငျ့တဲ့ အပွေးပုံစံလေးမြိုးနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ အပွေးဖိနပျကို ဘယျလိုရှေးခယျြမလဲ
Adidas ခဈြသူတှအေားလုံးကို ပွနျလညျမြှဝပေေးဖို့ ပို့ဈတဈခုကို စီစဉျထားပါတယျ။ ဒီပို့ဈမှာတငျဆကျပေးမယျ့ အကွောငျးအရာဟာ Adidas ပရိသတျတှပေါမက ဖတျရှုသူတိုငျးအတှကျ အကြိုးရှိမယျ့အကွောငျးအရာတဈခုဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ မနကျစောစော ကိုယျလကျလှုပျရှားအားကစားလုပျသူတှေ၊ ကနျြးမာရေးလကေ့ငျြ့ခနျးနဲ့ အပွေးလကေ့ငျြ့သူတှေ၊ ကိုယျကာယလိုကျစားသူတှေ အားလုံးအတှကျ အကြိုးရှိပွီး အသုံးတညျ့စမေယျ့ ဗဟုသုတတဈခုကို ဒီပို့ဈမှာ မြှဝပေေးသှားမှာပါ။ ကိုယျကိုယျတိုငျက ကနျြးမာရေးအရ အပွေးလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျသူပဲဖွဈဖွဈ၊ ကိုယျ့ရဲ့ မိတျဆှသေူငယျခငျြးထဲက အပွေးသမားတှကေို ဒီအကွောငျးအရာလေး ပွနျလညျမြှဝပေေးတာပဲဖွဈဖွဈ အားလုံးအကြိုးရှိစဖေို့ ရညျရှယျထားပါတယျ။ အဲဒါကတော့ အပွေးအမြိုးအစား ဘယျနှဈမြိုးရှိသလဲဆိုတာနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့အပွေးပုံစံ၊ ကိုယျရှေးခယျြထားတဲ့ အပွေးပုံစံအပျေါ မူတညျပွီး ဘယျလိုမြိုးဖိနပျကို ရှေးခယျြသငျ့သလဲဆိုတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
(၁) လှတျလှတျလပျလပျနဲ့ ပေါ့ပါးသှကျလကျတဲ့ Fast Run အပွေးပုံစံ
တဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ အခွခေံခမြှတျထားတဲ့ အပွေးအမြိုးအစား ရှဈမြိုးရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Adidas က ထုတျလုပျတဲ့အားကစားဖိနပျတှရေဲ့ ပေးစှမျးတဲ့ ဂုဏျသတ်တိတှအေရဆိုရငျတော့ အပွေးအမြိုးအစားကို လေးမြိုးလေးစား ခှဲခွားသတျမှတျထားပါတယျ။ အဲဒီထဲကမှ ပထမဆုံးတဈခုကတော့ ပေါ့ပါးသှကျလကျတဲ့ အပွေးပုံစံ Fast Run ဖွဈပါတယျ။ Fast Run ဆိုတဲ့ နာမညျအတိုငျး ပေါ့ပေ့ါးပါးပါးပွေးတဲ့ အပွေးသမားတှေ၊ မနကျစောစော အခြိနျမှနျထပွေးတဲ့သူတှဟော Fast Run အပွေးသမားတှဖွေဈပွီး သူတို့တှဟော ကနျြးမာရေးလိုအပျခကျြအရ သကျလုံကောငျးစဖေို့၊ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျထိနျးညှိဖို့နဲ့ သှေးလညျပတျမှုကောငျးစဖေို့အတှကျ အပွေးလကေ့ငျြ့ခနျးကို လုပျဆောငျတဲ့သူမြိုးတှဖွေဈကွပါတယျ။ Fast Run အပွေးသမားတှဟော အမြားအားဖွငျ့ ကနျြးမာရေးကောငျးကြိုးတှေ ရရှိခံစားနိုငျဖို့ အပွေးလကေ့ငျြ့တဲ့သူမြိုးတှဖွေဈတဲ့အတှကျ ဖိနပျရှေးခယျြတဲ့နရောမှာလညျး ပေါ့ပါးသှကျလကျတဲ့ ဖိနပျမြိုးကို ဦးစားပေးရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။ ကိုယျဟာ Fast Run အပွေးသမားဆိုရငျတော့ ကိုယျနဲ့သငျ့တျောတဲ့ အပွေးဖိနပျတဈရံ မရှိမဖွဈလိုအပျပွီး စှမျးဆောငျရညျအသငျ့အတငျ့ရှိတဲ့ Adidas Questar နဲ့ Cloudfoam မျောဒယျလိုဖိနပျမြိုးဟာ Fast Run အပွေးသမားတှနေဲ့ လိုကျဖကျကိုကျညီတဲ့ ဖိနပျမြိုးဖွဈပါတယျ။
(၂) ဟနျခကျြညီတဲ့ ခွလှေမျးတှနေဲ့အတူ မွို့တဈပါတျပတျမယျ့ City Run အပွေးပုံစံ
City Run အပွေးပုံစံကို မွငျသာအောငျပွောရမယျဆိုရငျတော့ မနကျပိုငျးနဲ့ ညနပေိုငျးတှမှော နားကွပျနှဈဖကျတပျပွီး မွနျမွနျနဲ့မှနျမှနျပွေးနတေဲ့ အပွေးသမားတှကေို ဆိုလိုတာပါ။ City Run အပွေးသမားတှဟော မြားသောအားဖွငျ့ တာတိုပွေးသူတှဖွေဈပွီး မွို့တဈဝိုကျနရောအနှံ့အပွားမှာ သူတို့ကိုတှရေ့တတျပါတယျ။ ကားလမျးမ ပလကျဖောငျးတှေ၊ ပနျးခွံတှနေဲ့ ကစားကှငျးလိုနရောမြိုးတှဟော City Run အပွေးသမားတှေ ပွေးလရှေိ့တဲ့နရောတှဖွေဈပွီး သူတို့ဟာ ကိုယျ့အာရုံနဲ့ကိုယျ အေးအေးလူလူ အပွေးလကေ့ငျြ့တဲ့သူမြိုးတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ Fast Run နဲ့ City Run အပွေးပုံစံတှဟော ကနျြးမာရေးကို အထောကျအကူပွုပွီး ခန်ဓာကိုယျအကြိုးကြေးဇူးတှကေို ပေးစှမျးတဲ့ အပွေးပုံစံတှဖွေဈကွပါတယျ။ City Run ပွေးတဲ့သူတှဟော Fast Run ပွေးသူတှထေကျ ခရီးအကှာအဝေးပိုပွေးကွတဲ့အတှကျ စှမျးဆောငျရညျတဈဆငျ့မွငျ့တဲ့ ဖိနပျမြိုးကို လိုအပျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ City Run ပွေးတော့မယျဆိုရငျ စှမျးအငျထုတျနညျးပညာတှပေါဝငျတဲ့ Pureboost နဲ့ Solarboost လို မျောဒယျဖိနပျမြိုးကို ဦးစားပေးရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။
(၃) စှမျးရညျအပွညျ့နဲ့ တာရှညျပွေးတဲ့ Long Run အပွေးပုံစံ
Long Run အပွေးသမားတှကေတော့ Fast Run နဲ့ City Run အပွေးသမားတှထေကျပိုပွီး အပွေးလကေ့ငျြ့ခနျးအပျေါမှာ အားစိုကျသူတှဖွေဈကွပါတယျ။ Long Run အပွေးသမားတှအေတှကျ ပွေးခွငျးဟာ သူတို့ရဲ့ဝါသနာတဈခုဖွဈပွီး တဈနထေ့ကျတဈနကေို့ ပိုပိုပွီး ဝေးဝေးပွေးနိုငျဖို့၊ သတျမှတျထားတဲ့ အကှာအဝေးကို အခြိနျတိုအတှငျးရောကျနိုငျဖို့နဲ့ ကိုယျ့ရဲ့စံခြိနျကိုယျပွနျခြိုးနိုငျဖို့ တစိုကျမတျမတျ ကွိုးစားအားထုတျကွသူတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Long Run အပွေးသမားတှဟော ကိုယျဘယျလောကျထိ ပွေးနိုငျသလဲဆိုတဲ့အပျေါမှာ အောငျမွငျမှုစံနှုနျးအဆငျ့ဆငျ့ ခမြှတျထားကွသလို ခရီးတဈခုကို ဆုံးခနျးတိုငျအောငျ ပွေးပွီးသှားရငျလညျး ကိုယျဘယျလောကျထိပွေးနိုငျခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အပျေါမှာ မှတျကြောကျစိုကျထူကွသူမြား ဖွဈပါတယျ။ Long Run အပွေးသမားတှဟော မြားသောအားဖွငျ့ တာရှညျပွေးသူမြားဖွဈကွတဲ့အတှကျ စှမျးဆောငျရညျပိုမွငျ့တဲ့ ဖိနပျမြိုးကို လိုအပျပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ မွငျ့မားတဲ့စှမျးဆောငျရညျနဲ့ စှမျးအငျတနျပွနျမှုပါဝငျတဲ့ Ultraboost နဲ့ Energy Boost လို ဖိနပျမြိုးဟာ Long Run အပွေးသမားတှအေတှကျ အရှေးခယျြသငျ့ဆုံး အရညျအသှေးမွငျ့အပွေးဖိနပျတှေ ဖွဈပါတယျ။
(၄) ယှဉျပွိုငျမှုကိုကွိုကျနှဈသကျပွီး စိနျချေါမှုတိုငျးမှာ အနိုငျယူမယျ့ Power Run အပွေးပုံစံ
နောကျဆုံး Power Run အပွေးပုံစံကတော့ စဈမှနျတဲ့ အားကစားသမားတှရေဲ့ စိတျဓါတျနဲ့ စှမျးအငျအပွညျ့ကို ထုတျသုံးတဲ့ အပွေးပုံစံဖွဈပါတယျ။ ပွိုငျပှဲဝငျအပွေးသမားအမြားစုမှာ Power Run အပွေးပုံစံကို ကငျြ့သုံးတာတှရေ့ပါတယျ။ မာရသှနျအပွေးသမားတှေ၊ အိုလံပဈအပွေးသမားတှေ၊ စံခြိနျခြိုးမယျ့ အပွေးသမားမြိုးတှေ အစရှိတဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျအပွေးသမားတှဟော Power Run ပွေးသူတှဖွေဈပွီး သူတို့တှဟော ကိုယျ့ရဲ့တဈနတေ့ာစှမျးအငျနဲ့ အခြိနျတှကေို အပွေးလကေ့ငျြ့ခွငျးတဈခုတညျးအတှကျ အသုံးခကြွသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ Power Run အပွေးသမားတှဟော ကိုယျ့ရဲ့စှမျးဆောငျရညျကို တိုးတကျထကျမွကျလာအောငျ အမွဲတမျးသှေးနသေူတှဖွေဈသလို ပွိုငျပှဲကို အဆုံးအဖွတျပေးနိုငျတဲ့ ခွလှေမျးတဈလှမျး ဒါမှမဟုတျ စက်ကနျ့တဈစက်ကနျ့ရဲ့ တနျဖိုးကို ကောငျးစှာနားလညျသဘောပေါကျသူတှပေါ။ အပွေးအမြိုးအစား လေးမြိုးရှိတဲ့အထဲက ဒီ Power Run အပွေးပုံစံဟာ ခှနျအားအစိုကျထုတျရဆုံးနဲ့ စှမျးအငျအမွောကျအမွားအသုံးခရြဆုံးဖွဈတဲ့အတှကျ Power Run ပွေးတော့မယျဆိုရငျ စိတျရောကိုယျပါ အားအငျပွညျ့ဝပွီး အဆငျသငျ့ဖွဈနဖေို့ လိုအပျတဲ့အပွငျ အရညျအသှေးမွငျ့တဲ့ အပွေးဖိနပျတဈရံကတော့ မရှိမဖွဈ လိုပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ အမွငျ့မားဆုံးစှမျးဆောငျရညျပေးစှမျးတဲ့ Alphabounce နဲ့ Alphabounce Beyond လိုဖိနပျမြိုး၊ Boost နညျးပညာရာနှုနျးပွညျ့ပါဝငျတဲ့ Ultraboost လိုဖိနပျမြိုးဟာ Power Run အပွေးသမားတှအေတှကျ အသငျ့တျောဆုံးဖိနပျတှဖွေဈပါတယျ။
ဒီလောကျဆိုရငျ အပွေးအမြိုးအစား လေးမြိုးက ဘာတှလေဲ?သူတို့နဲ့ လိုကျဖကျကိုကျညီတဲ့ အပွေးဖိနပျမြိုးက ဘာတှဖွေဈမလဲဆိုတာကို သိရှိသှားလောကျပွီထငျပါတယျ။ အခုလိုမြိုး ကိုယျကာယလိုကျစားသူမြားအားလုံး အကြိုးရှိပွီး ဗဟုသုတဖွဈစမေယျ့ ပို့ဈတှကေို အခြိနျမှနျတငျဆကျပေးသှားမှာဖွဈတဲ့အတှကျ စောငျ့မြှျောဖတျရှုနိုငျပါတယျ။ ဖတျရှုပေးတဲ့အတှကျ အထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ဒီပို့ဈကိုဖတျပွီး ကိုယျကရော ဘယျလိုအပွေးအမြိုးအစားထဲပါနလေဲ? ဘယျလိုအပွေးသမားမြိုးကို ခုံမငျလဲဆိုတာကို ကှနျမနျ့ကနတေဆငျ့ ပွနျပွောခဲ့ပေးပါဦး။